Chọpụta otu ị ga - esi họrọ sofa kachasị mma maka ime ụlọ gị | Bezzia
Họrọ sofa gị maka mpaghara ime ụlọ
Susana Garcia | 29/03/2021 20:00 | .Chọ Mma, Ngwongwo
El sofa bụ ihe dị oke mkpa na ndụ anyị, ebe ọ bụ ohere nkasi obi. Ọ bụ ebe anyị ji atụrụ ndụ mgbe anyị laruru, ọ bụ ya mere na ọ ga-abụrịrị akụkụ dị mkpa nke ịchọ mma anyị. Họrọ sofa maka ime ụlọ dị ndụ bụ ọrụ dị mgbagwoju anya n'ihi na anyị ga-ahọrọ nke ọma ụdị, akwa ma ọ bụ agba, yana nha na nkasi obi.
Anyị ga ahụ echiche dị iche iche mgbe ị na-eji akwa sofa na-achọ ime ụlọ ahụ dị ndụ. Ngwongwo a kachasị mkpa n'ime ime ụlọ ahụ, ebe kachasị dị na ya na ihe mbụ na-adọta uche, yabụ anyị ga-ahọrọ ya nke ọma. Enwere ọtụtụ sofas na ọ bụ ya mere anyị nwere ọtụtụ ihe ịhọrọ.
1 Akpụkpọ anụ sofa
4 Agba sofa
6 Utda na-anọpụ iche na ime ụlọ ahụ
na akpụkpọ anụ sofas bụ iberibe nke ogologo oge ọ bụrụ na anyị na-elekọta ha ka ha kwesịrị. Ha dị ọcha ma dịgide ọtụtụ afọ na afọ. N'okwu a, ịzụta ụdị sofas a bụ nnukwu ego. Ha dị oke ọnụ ma na-adịru ogologo oge karịa nke akwa. Ọ bụ ya mere na n'ọnọdụ a ọ ka mma ịhọrọ otu mpempe akwụkwọ nwere kpochapụwo ma dị mfe nke anaghị apụ n'ụdị. Na nke a anyị na-ahụ otu na agba aja aja mana enwekwara akpụkpọ anụ na akwa ma ọ bụ ụda ojii. Ọ dị anyị ka otu ọmarịcha mma na mma.
Thedị ejiji ejiji nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ime ụlọ anyị. Ọ bụrụ n’itinyekwula arịa ụlọ ndị ọzọ mgbe ochie, ị nwere ike ịgụnye sofa vintage. A na-ejikarị akpụkpọ anụ na akpụkpọ anụ mee agadi ndị a ma na-adịgide adịgide. Ha nwere ọtụtụ agwa ọ bụ ezie na ị ga-agbakwunye ụfọdụ cushions iji mepụta ọdịiche na aka dị nro. Ọ bụrụ na oche ndị ahụ nwere mmetụ ọhụụ, anyị ga-enwe ike ịmepụta ihe dị iche iji megharịa ụdị sofa.
Otu n'ime Sọfas mara mma kachasị mma ị nwere ike ịzụta bụ nke nwere chaise longue. Typedị sofas a zuru oke ma ọ bụrụ na anyị nwere ohere n'ime ime ụlọ ahụ, ebe ọ na-enye anyị ohere ịdina ala kpamkpam. Otu n'ime nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji oge dị ukwuu na sofa bụ nke ogologo oge. Buyzụta sofa na ndò na-anọpụ iche na ị ga-enwe ọ thisụ na ibe a ọtụtụ afọ na-abịa. Na nke a, ha ahọrọla ụda ọcha, ọ bụ ezie na a na-ahọrọkarị ọtụtụ agba dị iche iche dịka isi awọ.
una ọzọ obi ike echiche bụ ịhọrọ sofa na-atọ ụtọ-aj u ma ọ bụ mara mma nke na-adọta uche. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nhọrọ dị ize ndụ n'ihi na anyị ga-ejikọta agba nke sofa na ihe ịchọ mma ndị ọzọ. Nwere ike ikpokọta cushions ka ha iche na mix dị iche iche na agba na a fun na mbụ. Nke a, dịka ọmụmaatụ, nwere agba edo siri ike nke na-adọta uche ma na-eme sofa ihe kachasị mkpa n'ime ime ụlọ ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ otu echiche nke na-agbanwe agbanwe n'ihi na ịchọrọ ịgbanwe oghere ịchọrọ, mgbe ahụ anyị na-agwa gị ka ị nwee nnukwu sofas modular. Typesdị sofas ndị a mejupụtara iberibe na usoro dị mfe, na-enwe naanị ahịrị. A na-erekarị ha na ụda ndị bụ isi ka ha wee jikọta ngwa ngwa. Fọdụ nwere backrest na ụfọdụ enweghị, nke mere na iche iche chaise longues ma ọ bụ sofas nwere ike ịmepụta. Ọ bụ ihe ọchị na echiche pụrụ iche maka ime ụlọ ọ bụla.
Utda na-anọpụ iche na ime ụlọ ahụ
Otu n'ime echiche kacha mma maka ụdị ime ụlọ ọ bụla na-ahọrọ sofa na ụda isi. Echiche a na-arụ ọrụ oge niile, ebe ọ bụ mpempe akwụkwọ nke ga-aga ihe niile. Thecha isi awọ na-ewu ewu ugbu a ma ọ dị mfe ijikọta, yana ịbụ agba nke eji emeghị ihe ngosi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Họrọ sofa gị maka mpaghara ime ụlọ
Stylesdị ejiji maka oge opupu ihe ubi nke nwere ike gbaa gị ume